Nei Ndisina Shamwari? | Vechiduku Vanobvunza Kuti
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Estonian Ewe Finnish French Georgian German Greek Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Iban Icelandic Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Lingala Lithuanian Malagasy Malay Malayalam Maltese Marathi Maya Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuMexico Mutauro Wemasaini wokuRussia Myanmar Norwegian Ossetian Papiamento (Aruba) Polish Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Punjabi Rarotongan Romanian Russian Sepedi Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tatar Telugu Thai Tsonga Turkish Turkmen Twi Tzotzil Ukrainian Uzbek Uzbek (Roman) Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Ngatitii uri paIndaneti, uri kuona mapikicha akatorwa papati ichangobva kuitwa. Shamwari dzako dzose dziripo, uye zvinoratidza kuti vainakidzwa chaizvo. Asi pane mumwe munhu asipo. Munhu wacho ndiwe!
‘Sei ndisina kukokwawo?’ unozvibvunza kudaro.
Paunenge uchifunga izvi unopedzisira wagumbuka. Unonzwa sokuti shamwari dzako dzakurasa! Ushamwari hwenyu hwaparara nyore nyore sezvinongoita imba yevhu. Unobva wasurukirwa chaizvo, uye unozvibvunza kuti, ‘Nei ndisina shamwari?’
Zvinoitika paushamwari uye pakusurukirwa
Kukunda zvaunotya pakuva neshamwari
Ichokwadi kana kuti Inhema
Kana uine shamwari dzakawanda, hauzombofi wakasurukirwa.
Kana ukataura neshamwari paIndaneti (social network), hauzombofi wakasurukirwa.
Kana ukagara uchitumira vamwe mameseji pafoni, hauzombofi wakasurukirwa.
Kana ukabatsira vamwe, hauzombofi wakasurukirwa.
Mhinduro dzezviri pamusoro apa ndinhema.
Kuva neshamwari dzakawanda hakurevi kuti hauzombofi wakasurukirwa.
“Ndine hanya neshamwari dzangu, asi dzimwe nguva ndinoona sokuti havambondiratidziwo hanya. Unowedzera kusurukirwa zvakanyanya kana uine shamwari asi shamwari dzacho dzisingaratidzi kuti dzinokuda.”​—Anne.
Kuva neshamwari dzaunotaura nadzo paIndaneti hakurevi kuti hauzombofi wakasurukirwa.
“Vamwe vanhu vanoita shamwari dzakawanda sokunge vari kuunganidza zvivezwa. Asi kuita makomo nemakomo ezvivezwa hakuiti kuti munhu anzwe achidiwa. Kana usina shamwari dzepachokwadi, kuva neshamwari dzakawanda dzepaIndaneti kwakangofanana nekuunganidza zvivezwa zvisina zvazvinokubatsira.”​—Elaine.
Kugara uchitumira mameseji pafoni hakurevi kuti hauzombofi wakasurukirwa.
“Dzimwe nguva kana wakasurukirwa unoramba uchingokanda ziso pafoni kuti uone kana paine shamwari yakutumira meseji. Ukaona kuti hapana kana mumwe chete akutumirawo meseji zvinogona kuita kuti uwedzere kusurukirwa!”​—Serena.
Kubatsira vamwe hakurevi kuti hauzombofi wakasurukirwa.
“Ndinogara ndichibatsira shamwari dzangu nezvimwe zvinhu asi idzo handisati ndambodziona dzichibatsirawo. Hazvirevi hazvo kuti ndinozvidemba kuti chandinofira chii asi kuti zvinongondishamisa kuti sei vasingandiitiriwo zvakanaka.”​—Richard.
Chinhu chinokosha chaunofanira kuziva: Kusuruvara kunobva pamaonero aunoita zvinhu. “Zvinokonzerwa nemafungiro aunoita, kwete nevamwe vanhu,” anodaro mukadzi anonzi Jeanette.
Zvii zvaungaita kana uchiona sokuti hauna shamwari uye wakasurukirwa?
“Kusurukirwa kunogona kukonzerwa nokusava nechokwadi nezvimwe zvinhu. Zvakaoma kuti uve neshamwari uye usununguke kwadziri kana uchiona sokuti vanhu vacho havakufariri.”​—Jeanette.
Bhaibheri rinoti: “Ida muvakidzani wako sezvaunozviita.” (VaGaratiya 5:14) Kuti tive neushamwari hwepachokwadi, hatifaniri kuzvitarisira pasi, uye panguva imwe chete tisingazvikudzi.​—VaGaratiya 6:3, 4.
Usanyanya kuzvinzwira tsitsi.
“Kusurukirwa kwakafanana nejecha rokuti ukaritsika unonyura. Kana ukatambira pajecha iri zvinozokuomera kubvapo. Kana ukanyanya kuzvinzwira tsitsi, zvichaita kuti shamwari dzako dzitambire kure newe zvobva zvatoita kuti uwedzere kusurukirwa​—Erin.
Bhaibheri rinoti: “Rudo . . . haruzvitsvakiri zvarwo.” (1 VaKorinde 13:4, 5) Zvinoitika ndezvekuti, kana tikanyanya kuzvifunga, tinopedzisira tisisina hanya nevamwe uye kuita izvi kunoita kuti shamwari dzitambire kure. (2 VaKorinde 12:15) Chokwadi ndechokuti: Kana uchifunga kuti mufaro wako unobva pakuti vamwe vanokuona sei, hauzombofari muupenyu! Kutaura kwokuti “Hapana anombondifungawo” uye “Hapana anombondikokawo” kunoita kuti zviite sokuti kufara kwako kunobva pane vamwe vanhu. Kuita izvozvo kwakafanana nekuvabvumira kudzora upenyu hwako.
Usangoti munhu wose wawaona ishamwari.
“Vanhu vakasurukirwa vanoda vanhu vanovapa nguva yokuvateerera, uye kana kusurukirwa kwacho kukanyanyisa vanopedzisira vava kungoti chero munhu anoratidza kuti ari kuvateerera yatova shamwari yavo. Chavanongoda kudiwa. Asi vamwe vanhu vanoita kuti unzwe sokuti vanokuda vobva vakushandisa. Kana zvikadaro unobva watonyanya kusurukirwa.”​—Brianne.
Bhaibheri rinoti: “Munhu anofamba nevanhu vakachenjera achava akachenjera, asi iye anofambidzana nemapenzi zvichamuipira.” (Zvirevo 13:20) Munhu afa nenzara anodya chero chaawana. Ndizvowo zvinoitika kuvanhu vanotsvaka shamwari nemaziso matsvuku vanongoti chero wavaona ishamwari. Zvinogona kupedzisira zvaita kuti vawire mumaoko evanhu vanovashandisa, vachiona sokuti hapana chakaipa nokushamwaridzana nevanhu vakadaro.
Mhedziso: Munhu wose ane nguva dzaanombosurukirwa; kungoti vanhu vanosurukirwa zvakasiyana. Kusurukirwa kunorwadza, asi kunokonzerwa nemaonero atinoita zvinhu. Zvatinofunga ndizvo zvinoita kuti tive nemaonero atinoita, uye tinogona kudzora zvinhu zvatinofunga.
Usatarisira vamwe kuti vaite zvinhu zvavasingakwanisi. “Haasi munhu wose acharamba ari shamwari yako,” anodaro Jeanette, ambotaurwa kwekutanga, “asi uchawana vanhu vane hanya newe. Uye chinongodiwa kuva nevanhu vane hanya newe. Izvi ndizvo zvinoita kuti usasurukirwe.”
Unoda rumwe rubatsiro here? Verenga bhokisi rakanzi “ Kukunda Zvaunotya Pakuva Neshamwari.” Dhaunirodhawo paIndaneti nyaya inoti “Kukunda Dambudziko Rokusurukirwa.”
“Udza mumwe munhu nezvekusurukirwa kwauri kuita. Usakuvarira mukati. Panogona kunge paine vamwe vari kusangana nedambudziko rakaita serako. Dzimwe nguva unongoda shamwari imwe chete yaunoudza zvinokunetsa.”​—Vanessa.
“Haufaniri kupa vamwe mhosva nemhaka yekusurukirwa kwauri kuita. Dzimwe nguva ndiwe unenge wazvibvisa pane vamwe. Saka ita zvose zvaunogona kuti uve pedyo nevamwe zvakare. Kana zvikaramba kushanda, tsvaka shamwari itsva, vanhu vausati wamboshamwaridzana navo.”​—Taylor.
“Shamwari yangu ine dambudziko rokugara yakasurukirwa. Kunyange zvazvo achigara nevanhu vane hanya naye, anoona sokuti hapana anomuda kana kumutarisawo. Anonyepedzera kunge hapana chiri kumunetsa. Ndinofunga kuti maitiro ake iwayo ndiwo anomutadzisa kuita shamwari. Vanhu vanomuona vanofunga kuti haana basa nevamwe, uye vamwe vanoona zvakaoma kushamwaridzana naye.
“Shamwari yangu inotyawo kurwadziswa, saka vanhu pavanomubvunza nezveupenyu hwake, iye anovafungira zvisizvo kana kuti anoona sokuti ushamwari hwacho haumbobudiriri. Anogara akasurukirwa nokuti vanhu vakawanda havamunzwisisi, uye zvinotowedzerwa nekusada kwake kuudza vamwe zviri mupfungwa dzake.
“Shamwari yangu inofanira kuziva kuti kuudzawo vamwe zvimwe zvinhu kunobatsira kuti muwirirane uye vawedzere kukunzwisisa. Zvinovabatsira kuti vashamwaridzane newe. Ndinovimba kuti shamwari yangu ichachinja mafungiro ayo, yokunda zvainotya pakuva neshamwari.”​—Elaine.
Ona zvinhu zvitatu zvaungaita kuti ukunde kusurukirwa uye uve neshamwari.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Nei Ndisina Shamwari?
ijwyp nyaya 27